एक दूर विगतः कवि कृष्णभूषण बलसँगको
स्टाटस, पञ्च विस्मृतको ब्लग
बालक दुर्बासाको गनगन
फेसबुक : दुई
Poet Ganesh Khadka Interview
All Posts/About the Blog1
Book Review/A Reader's View15
Pancha Vismrit is also on:
— पञ्च विस्मृत
✍By Pancha Vismrit
औँला काँपेका छन् यतिखेर, केवल एउटा लेखजतिको शब्द दौड दौडनुछ । एक अपत्यारिलो, एक अस्वाभाविक घटनाले अनौठै छाप छोडेको छ मनभित्र कतै ।
कृष्णभूषण बल, कवि जस्तै कवि, जसको असामयिक स्वर्गारोहणले साहित्यिक मन शोकाकुल भएका छन् । निठूर कृष्णभूषण बल, जसले यति छिट्टै, ६५ वर्षे उमेरमै, छोडेर जानुहुनेछ भन्ने शायदै कसैले कल्पना गरेका थिए ।
यही जुन २६ को मङ्गलबार (२०१२) उहाँले हामी सबैलाई छोडेर गएपनि उहाँ हाम्रा मन-मनमा अमर भएर रहनुहुनेछ । मेरो मनमा भने उहाँसँग बिताएका पलहरू आलो भएर आएका छन् यतिखेर ।
जब मैले विराटनगरको साहित्यिक उर्वरतामा पाइला टेकेँ, वरिष्ठ कवि कृष्णभूषण बल मेरा एक आदर्श कविका रूपमा देखिनुभएको थियो । वास्तवमै भन्ने हो भने, मेरो आँखामा, उहाँभन्दा उच्च कवि व्यक्तित्त्वका, उहाँका भन्दा पृथक र उत्कृष्ट कविता लेख्ने कुनै कवि देखा परेनन् — विराटनगरमा मात्र नभएर सिङ्गै पूर्वञ्चलमा । अझ सिङ्गै देशमा । पठनमा सरलता, माधुर्य, भावमा गाम्भीर्य उहाँका कविताका विशेषता भए । शब्दकोशका पानाबाट जबर्जस्ती अप्रचलित, दूर्बोध शब्दलाई लिएर उहाँले आफ्ना कविताका ‘इन्ग्रीडिएन्टस्’ कहिल्यै बनाउनु भएन । बरू सरल र सरस भाषा शैलीको बाटो हुँदै विम्व र प्रतीकको शिखर उक्लनुभयो । र, त्यही बाटो हुँदै नै उहाँले आफ्ना कवितामा संरचनात्मक पृथकता समेत ल्याउनु भयो ।
फलतः उहाँका कविता पढ्दै यो कविता कोद्वारा रचित हो भन्ने कुरो स्पष्ट हुन्छ । उहाँका कविताका संरचनात्मक विशेषता हुन् प्रायः हरेकमा अन्त्यानुप्रस राखिनु । यद्यपि, तिनमा पद्यको आदिम गन्ध पटक्कै पाइन्न । त्यसैले समाचार जस्तो कविता लेख्ने होड चलेको यो समयमा उहाँका कविता स्वाभाविक रूपमा पृथक छन् र अनुकरणीय रहेका छन् । थोरै लेख्ने तर उत्कृष्ट लेख्ने उहाँका कविता वास्तवमा ‘मास्टर पिस’ नै हुन् । उहाँले वनितासँगको एक अन्तरवार्तामा भन्नु पनि भएको छ — “कहिलेकाहीँ त छ महिना पनि जान्छ ।” अर्थात् कविताको सिर्फ सङ्ख्या बढाउनलाई कविता नलेखेर उहाँ ‘कविता’ लेख्नलाई कविता लेख्नुहुन्थ्यो । त्यही भएर नै उहाँले पुस्तकको सङ्ख्या उल्लेख्य बढाउन सक्नुभएन । र, यसैमा उहाँ सन्तुष्ट हुनुहुनथ्यो पनि । वि. सं. २०४१ मा प्रकाशित उहाँको ‘भोलि बास्ने बिहान’ को दोस्रो संस्करण वि. सं. २०५९ मा साझा प्रकाशनले प्रकाशित गरेको छ । यस अघि अर्थात् वि. सं. २०३४ मा ‘दाज्यू तिम्रो हात चाहिन्छ’ नामक खण्डकाव्य प्रकाशित गर्नुभएको थियो ।
वि. स. २०५९ को उत्तरार्धमा विराटनगरकै माटो कुल्चेर म आफ्नो एक उपन्यास प्रकाशनको तयारीमा लागेँ । इटहरीका साहित्यकार डा. बद्रिविशाल पोखरेलले त्यसको पाण्डुलिपि अध्ययनगरिसकेपछि मेरो अनुहारमा हेरेर भन्नुभयो, “मैले आफ्ना केही रचनाहरू च्यातेर मिल्काएको छु । राखेको भए हुनेरहेछ लाग्छ अहिले । पुस्तकको रूपमा धेरैबाट उत्कृष्ट छानेर प्रकाशन गर्नु राम्रो हो ।”
मसित त ‘धेरै’ कहाँ थिए र ? थियो एउटै । थन्काएँ उपन्यास र लागेँ कवितातिर ।
जम्मा ३६ वटा कविताहरूको सङ्ग्रह प्रकाशन गर्ने रहर र शाहस दुवै ममा पलाएर आयो । कृष्णभूषण बल त भन्नुहुन्थ्यो, “एउटा सङ्ग्रह त आउनै पर्यो भनेर साथीहरूले साह्रै भनेपछि ‘भोलि बास्ने बिहान’ को प्रकाशन गर्नुपरेको हो ।” तर मलाई त कसैले त्यसरी कर गरेका थिएनन् । न त कसैले मेरा कवितालाई अब्बल दर्जाको कसी नै लगाएका थिए । हामीबीच यही नै भिन्नता रह्यो कृति प्रकाशन गर्ने मानसिकता निर्माणको । म असफल भएँ । उहाँ सफल हुनुभयो ।
मैले मेरो प्रथम प्रकाशित कविता सङ्ग्रहको नाम ‘जीवन आँशु र कविता’ राखेको थिएँ । जुन शीर्षकको कवितामा ‘नदेखेको आकाश’ भन्ने शब्द रहेछ। जुन मैलेभन्दा पहिल्यै उहाँले देख्नुभयो, र त्यसलाई ‘नदेखिएको आकाश’ गरिदिनुभयो । त्यही नै मेरो सो प्रथम प्रकाशित कृतिको नाम रहनगयो । कवि सुमन पोखरेलको गीत सङ्ग्रह ‘हजार आँखामा यी आँखा’को शीर्षक पनि उहाँले नै राख्नु भएको थियो — पछाडिको ‘धाउँछन्’ शब्दलाई काटेर । र, यसरी मेरो कृतिको न्वारन उहाँबाटै भएको थियो भनेर यहाँ उल्लेख गर्दा गौरवानुभूति भएको छ मलार्इ ।
नदेखिएको आकाश (वि. सं. २०६०, वैशाख, १३) का कविताहरू पढेर उहाँले “एक राम्रा कविको उदय हुँदैछ है यहाँ । भनेर प्रतिकृया दिनुभएको थियो । सस्तो भावुकता बोकेका मेरा कविताहरूभन्दा पनि उहाँले मेरो सो पुस्तकको लागि मैले लेखेको लेखकीयको तारिफ गर्नुभएको थियो । नदेखिएको आकाशसँगसँगै अन्य दुई कृति पनि प्रकाशित हुने क्रममा थिए । एक, कवि मुकुल दाहालको ‘सीमातीत सीमान्त’ र पत्रकार मधु राईको ‘नारी आयाम’ । नारी आयामकी लेखिकालाई मेरो लेखकीय देखाउदै भाँनुभएथ्यो, “यी यस्तो लेख्नुहोस् न लेखकीय ।” किनभने उहाँ ‘के लेख्ने के’को अवस्थामा हुनुहुन्थ्यो । मेरो लेखकीयमा अभिव्यक्त कुरा उहाँले कुनै एक पत्रिकामा व्यक्त गरिसकेको, विचारसँग मेल खान गएको कुरा पनि गर्नुभयो । यसले भने मेरो मनमा केही असजिलोपनाको अनुभव भएको थियो । किनभने मैले उहाँको त्यस्तो अन्तर्वार्ता कतै पढेको थिइनँ ।
विराटनगरको साहित्यिक उर्वरतामा म आफूलाई त्यसरी अभ्यस्त बनाउँदै लगेको थिएँ । त्यो मेरो साहित्यिक प्रशिक्षणकाल थियो । हरेक साहित्यिक कार्यक्रम र गोष्ठीहरूमा मेरो सहभागीता रहन्थ्यो । र, हरेक ती सहभागिताहरूबाट एकदुई कुराहरू सिकेर फर्किन्थेँ म । वाणी प्रकाशनले पाक्षिक कवि गोष्ठी गर्थ्यो । अद्यापि छ । ती गोष्ठीका मुख्य आकर्षण थिए, त्यसताका — कवि मनु मञ्जिल, श्रीधर शर्मा र दिनेश पौडेल । उहाँहरू इटहरीबाट आउनुहुन्थ्यो । गोष्ठी सकेपछि उहाँहरू कृष्णभूषण बलसँग केहीबेर गफ गर्नुहुन्थ्यो र फर्किनुहुन्थ्यो । म कम बोल्ने मान्छे । त्यो भीडको एकछेउबाट ती सबै कुरा नियाली रहेको हुन्थेँ । सिकिराखेको हुन्थेँ । एक्लै । र, कहिले आफूले वाचन गरेको कविताको ‘कमेन्ट’ माँगिरहेको हुन्थेँ । कविता कस्तो लेखिनु पर्छ ? अथवा साहित्य सिर्जना कसरी गरे त्यो उत्कृष्ट बन्दछ भन्ने कुराको ज्ञान मैले कृष्णभूषण बलबाटै लिएको हुँ ।
कवि मनु मञ्जिलबाट पनि धेरै ज्ञान लिएको छु यस कुरामा । उहाँ भने कृष्णभूषण बलको एकदमै सच्चा भक्त हुनुहुन्थ्यो । त्यो ताका मनु मञ्जिल दुई कविको खुबै चर्चा गर्नुहुन्थ्यो । एक कृष्ण भूषण बल र दोस्रो वैरागी काइँला । उहाँ वैरागी काइँलाका कविताका टुक्राहरू अक्सर राम्रा कविताका उदाहरणका रूपमा पेस गर्नुहुन्थ्यो । यता ‘कृष्णभूषण’ शीर्षकमा समेत उहाँले कविता लेख्नुभएको छ ।
मैले मलेसियाबाट दोस्रो कविता सङ्ग्रहको तैयारी गर्न लाग्दा मनु मञ्जिलबाट एउटा कुरोको अपेक्षा गरेको थिएँ । त्यो थियो सो सङ्ग्रहमा समाविष्ट सबै कविताको उहाँबाट अङ्ग्रेजीमा अनुवाद होस् । तर त्यो योजना उहाँको व्यस्तताको कारण सफल हुन सकेन । जति कविता अनुदित भएका छन् तिनैलार्इ मात्र भएपनि सङ्ग्रहमा राख्नुपर्यो भन्ने मेरो कुरोप्रति उहाँले भन्नु भएको थियो, “ हतारको कामको जस र महत्त्व हुन्न भन्नुहुन्छ कृष्णभूषणज्यू ।” अन्ततः सबै योजना असफल भए । आफैँले अनुवादको काम थालेँ । कृष्णभूषण बलज्यू कतिसम्मको प्रभावशाली हुनुहुन्थ्यो भन्ने कुरोको आँकलन यहाँबाट सजिलै गर्न सकिन्छ ।
कम बोल्ने, शान्त र शालीन स्वाभावको कृष्णभूषण बलसँग केवल एउटा यात्रा गरेको छु । विराटनगरदेखि धरानसम्मको । जनयुद्ध चलिरहेको अवस्था । ठाउँठाउँमा चेकिङ । देशभर अशान्ति फैलिरहेको बेला कवि बद्रि पलिखेले आफ्नो ‘शान्तिस्तूप’ कविता सङ्ग्रहको विमोचन कार्यक्रम राख्नुभएको थियो धरानमा, जहाँ कृष्णभूषण बल प्रमुख अतिथिको रूपमा आमन्त्रित हुनुहुन्थ्यो । त्यही मौकामा उहाँसँग छोटो र ऐतिहासिक यात्रा गरेको थिएँ । साथमा हुनुहुन्थ्यो — विवश पोखरेल, देवी पन्थी, महेश मार्सेली, मीन कुमार नवोदित श्रेष्ठ, सीमा आभास, लावण्य सापकोटा आदि । दुई सालअघि मात्र झापातिरको एक कार्यक्रममा उहाँकै हातबाट निमन्त्रणा-पत्र पाएको थिएँ । पत्र लिइसकेपछि हिँड्नेदिनको ठीक एक दिन अघिमात्र उहाँलाई फोनमा भनेँ, “म त जान नपाउने भएँ ।”
त्यसरी उहाँसँग यात्रा गर्ने अरू पनि मौका आउला लागेको थियो । त्यही नै अन्तिम मौका थिएछ । चुकाएँ ।
(कवि कृष्णभूषण बलको अटोग्राफ)
उहाँसित केवल दुई प्रश्न सोधेको थिएँ । मैले नजानेका । ती थिए — “उत्तरआधुनिकतावाद भनेको के हो ?” र “के गद्यमा पनि खण्डकाव्य लेख्न सकिन्छ ?” उहाँले प्रथम प्रश्नको जवाफ, “धेरै पछि हुने कुराको बारेमा लेख्यो भने त्यो उत्तरआधुनिकता हुनजान्छ ।” भनेर दिनुभएको थियो, भने दोस्रो प्रश्नको जवाफमा, “ हुन्छ, के तपाइँ लेख्दै हानुहुन्छ ?” सोध्नुभएको थियो । “लेखेर बाँच्न नसकिने अवस्थामा पनि हामी साहित्यलाई किन यति धेरै माया दिइरहेका छौं ?” — तेस्रो प्रश्न मनको, मनमै रह्यो ।
हामीले उहाँबाट लिने सबैभन्दा ठूलो शिक्षा हो — परिवार नै सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण हो भन्ने । उहाँले यस कुरालाई प्रमाणित गर्नुभएको छ मोफसललाई आफ्नो साहित्यिक कर्मथलो बनाएर जहाँ वाणी प्रकाशन एक साहित्यिक आस्थाको रूपमा उभिएर रहेको छ । वनितासँगको एक अन्तवार्तामा भन्नु पनि भएको छ, “मैले आफ्नो परिवारलाई बिर्सेर कहिल्यै साहित्यमा लागिनँ ।” आफ्नो दूर सपनाको पछि लागेर परिवार बिर्सनेहरूका लागि यो एक ‘अलार्म’ हो ।
वि. सं. २०६० को उत्तरार्धतिर उहाँ अर्को एक कविता सङ्ग्रह प्रकाशित गर्ने मनसायमा हुनुहुन्थ्यो । तर अचम्म त के भने सो सङ्ग्रहमा समाविष्ट हुने कतिपय कविताहरू उहाँका हातमा थिएनन् । ती कविताहरू देशका कुनै चर्चित पत्र−पत्रिकामा प्रकाशित थिए । तर, कुन अङ्कमा प्रकाशित थिए भन्ने कुराको उहाँलाई हेक्का थिएन । यसकोलागि कवि तथा कथाकार विवश पोखरेल उहाँलाई सम्झाइरहेको सुनिनुहुन्थ्यो । यही क्रममा एक दिन उहँले मलाई पनि आफ्ना केही कविता पढ्न दिएर प्रतिक्रिया माग्नुभयो । म अक्क न बक्क भएको थिएँ — मैले गुरू मानेका कविले आफ्ना कविताको प्रतिक्रिया माग्दा । उहाँको एक कविताको शीर्षक थियो ‘वातावरण’ जुन शीर्षक मलाई उति मन परेन । प्रतिक्रिया त दिनै पर्यो र भनेँ, “यसलाई परिवर्तन गरे कसो होला ?” तर त्यसपछि मेरो बोलि फुट्न सकेन । अर्थात् के कारणले परिवर्तन ? — को स्पष्टिकरण दिन सकेन ।
यतिखेर म विराटनगरदेखि टाढा छु । कृष्णभूषण बलको देहावसानले विराटनगर झनै टाढा लाग्न थालेको छ । उहाँको सम्झनामा शब्द दौडनु अनन्त यात्रामा निक्लनु जस्तै लाग्छ । उहाँको देहावसान भए पनि कृष्णभूषण बल नाम सदा अमर रहनेछ, उच्च रहनेछ ।
बस्, अहिलेलालाई श्रद्धा सुमन उनै छोडिजाने कविप्रति ।
२ जुलाई, २०१२, दम्माम, केएसए
Also published on www.samakalinsahitya.com
यस ब्लगका सबै रचनाहरू - ALL Posts
सदी'देखि 'नीलोको खोजमा'
Chandra Gurung March 7, 2013 at 9:25 PM
कवि कृष्णभूषणसित मात्रै एक पटक भेटेको छु । र अझै वहाँको अनुहार झल्झलती सम्झिन्छु कहिलेकाहिँ । संगत गर्न पाएन, तर पनि वहाँका कविताहरूबाट धेरै जानेको छु बुझेको छु कविता लेखन र कविताकैबारेमा । एक कवि जसले नेपाली कविता लेखनमा आफूलाई स्थापित गरेर जानु भयो । मोफसलमा रहेर केही गर्न सकिन्न अथवा मोफसल सधैँ पछाडि छ भन्ने भनाईलाई गलत साबित गरे आफ्नो लेखनको क्षमताले । कवि मित्र पञ्चजीले धेरै राम्रो लेख्नु भयो कवि कृष्णभूषणबारे । धन्यवाद ।
अपदस्त जिन्दगीले चिनाएको नाम हरिराज खेवा
✍ Pancha Vismrit
पचासको दशकमा मेरो सबैभन्दा प्रिय वस्तु केही थियो भने त्यो रेडियो थियो । अहिले जसरी मोबाइल फोन हातमा बोकेर घुम्ने गरिन्छ त्यो समय प्रायको साथमा रेडियो हुने गर्थ्यो । धनकुटा जिल्लाबासी भएको हुनाले रेडियो नेपाल क्षेत्रीय प्रसारण केन्द्र धनकुटाका हरेक कार्यक्रमहरु छुट्दैनथे । म आफैँ पनि साहित्य सृजना गर्थेँ । आफ्नो परिवारको सामु रेडियोबाट आफ्नो नाम आउँदा खुब आनन्द लाग्थ्यो । त्यतिबेला मैले लेखेको ‘हस्ताक्षर’ शीर्षकको गीतिकथा अत्यन्तै चर्चित भएको थियो । त्यो गीतिकथा दुईपल्ट प्रसारित मात्र भएन, त्यही गीतिकथा सुनेर डेढ दर्जन पत्रहरु समेत आए ।
आफ्नै बारे नलेखी नहुने भयो । किनभने म त्यति ‘प्रडक्टिभ’ हुनुको श्रेय धनकुटा जिल्ला आसपासका स्रष्टाहरुलाई जान्छ । वस्तुतः पचासको दशकसम्म पुस्तक, पत्रपत्रिका, कागज–कलम र रेडियोको जमाना थियो । सोशल मीडियालाई दिने सम्पूर्ण समय तिनलाई दिएर त्यतिबेलाका मान्छे आजका भन्दा बढी प्रडक्टिभ थिए भन्ने लाग्छ । मैले स्व. हरिराज खेवालाई न देख्न पाएँ, न त भेट्न नै; तर मेरो साहित्यिक सक्रियताका पछाडि कहीँ न कहीँ ‘अपदस्त जिन्दगी’ र स्व. सर्…
विदेशिएकाहरूको पीडामाथि उभिएर दर्शन छाँट्नु पर्दैन महाशय !
हामीले स्कुलमा केही यस्ता कुराहरु सिकेर आएका छौँ, जुन गलत छन् । जस्तो कि कम सुत्नू धेरै पढ्नू, टुप्पी कसेर पढ्नू । पैसा महत्त्वपूर्ण कुरा होइन, विद्या ठूलो कुरा हो । धन नहोस् तर सानो र सुखी परिवार होस् । एक थोपा पसिना भएपनि स्वदेशमै बगाउनू आदिइत्यादि । यी सब दर्शन मात्र हुन्, खोत्रो दर्शन । यी खोक्रो र जीवनविरोधी दर्शनहरुलाई कुर्कुच्चामुनि नपारी वैदेशिक रोजगारीको बहस सम्भव छैन । सम्पन्नहरुले विपन्नलाई उठ्न नदिने षडयन्त्रको दुर्गन्ध छ यीमध्ये कतिपयमा । आर्थिक स्वतन्त्रता हासिल नगरी यी दर्शनहरुलाई आत्मसात् गरे कुनै पनि बेला जीवन दुर्घटित हुन सक्छ । किनकि यिनमा कुनै वैज्ञानिकता छैन । वास्तविकता त कम सुत्नाले प्रभावकारी पठन हुन सक्दैन । पैसाको सही ज्ञानबिना सुखी परिवारको परिकल्पना गर्न सम्भव छैन । पसिना बगाउने कुरामा उत्पादकत्वको ख्याल गर्न अत्यावश्यक हुन्छ । त्यसैले त्यस्ता अवैज्ञानिक विचार र विचारकहरुलाई त्यति माथि पनि नहेर्नू जसले गर्दा यथार्थको टोपी भुइँमा खासोस् ।
नेपालमा विदेशिएका युवालाई हेर्ने दृष्टिकोण अत्यन्तै तल्लो स्तरको छ । “विदेश गएका युवा फर…
कविता–चिन्तन : एक
के तपाइँले आफूले पढ्न चाहेकै जस्तो कविता कतै पढ्न पाउनु भएको छ ?
केही कविलाई कवि भएर पनि स्वयम् कविताको मृत्युको घोषणा गर्न हतार छ । तर तिनै कवि विभिन्न कवि गोष्ठीहरुमा दौडिरहेका पनि देखिन्छन् । हो, कविता कम पढिन्छ । तर धेरै मान्छेलाई कवि बन्ने रहर छ । आम मान्छे जीवनमा एक पल्ट कविताका नाममा दुई शब्द कोर्न खोज्छ । शोसल मीडियाको दुनियाँ कविताबिना अपूरै देखिन्छ । वास्तवमा कवितालाई मान्छेले समयको यस बदलिँदो रुपमा पनि काखी च्याप्न छोडेको छैन । पुस्तकमा सीमित कविता इन्टरनेटमा निःशुल्क पढ्न पाइन्छ आजकल । कविताका बारेमा लेखिएका लाखौँ लेख रचना इन्टरनेटमा छन् । पुस्तकको रुपमा पनि कविताका किताब नै सबै बढी प्रकाशित हुन्छन् ।
तर के तपाइँले आफूले पढ्न चाहेकै जस्तो कविता कतै पढ्न पाउनु भएको छ ? यस पङ्क्तिकारले कमै पाएको छ । स्वयम्ले लेखेका कविता केही वर्षपछि फर्केर हेर्दा अकविता लाग्ने गर्छन् । यो यस पङ्क्तिकार व्यक्तिगत अनुभव हो । किन यस्तो भइरहेको छ ? वस्तुतः सिकाइको विभिन्न चरणहरु पार गर्दै जाँदा यो कुराको अनुभव हुने गर्दछ । यस प्रक्रियामा कविताक…
प्यालेष्टाइनी कवि अशसर फायद र उनको मृत्युदण्डको सजाय-प्रसङ्ग
यतिखेर सामाजिक सञ्जाललगायत विभिन्न मीडियामा प्यालेटाइनी कवि अशरफ फायाद निक्कै चर्चामा छन् । तर त्यो उनको कविताको सफलताको कारण भने हैन । बरु उनले लेखेको कविताकै कारण उनलाई साउदी सरकारले मृत्युदण्डको सजाय सुनाएपछि नेपाललगायत विश्वका विभिन्न मुलुकका कवि, लेखक, कलाकारहरु उनको बचाउका लागि आवाज उठाइरहेका हुन् ।
अशरफ फायदको पक्षमा ‘इन्टरनेशनल लिटरेचर फेष्टिवल बर्लिन’ले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, “हामी यूके र यूएस सरकारबाट यो कुराको माग गर्दछौँ कि अशरफ फायदको पक्षमा हस्तक्षेपकारी कदम चाल्दै साउदी अरेबियाको मानव अधिकारसम्बन्धी मापदण्डहरुको बारेमा कुरा उठाउन दबाब दिइयोस् ।”
त्यसैगरि एमनेस्टी इन्टरनेशनल यूकेले आफ्नो विज्ञप्तिमा भनेको छ, “हामी साउदी अधिकारीहरुसँग फायदलाई उनीमाथि लगाइएका सम्पूर्ण अभियोगहरुबाट छुटकारा दिन अनुरोध गर्दछौँ । साथै धर्मत्यागको आरोपमा कसैलाई पनि मृत्युदण्डको सजाय नदिन समेत आग्रह गर्दछौँ ।”
फायदलाई लागेको आरोपहरुमध्ये धर्मत्याग (Apostasy) पनि एक हो ।
कला र कविता सम्बन्धी विभिन्न सङ्गठनहरुमा बसेर महत्त्वपूर्ण काम गर्दै आएका प्यालेष्…
मेरो आँखामा ‘प्रभास’को प्रथम कविता
कविता लेखनको विषयमा मान्छेका आ–आफ्नै धारणा हुन्छन् । भन्नुको मतलब कसैले विचारमा जोड दिन्छन् त कसैले शिल्पमा । यी दुवैको सम्याक् संयोजन हुनसक्यो भने कविता उत्कृष्ट बन्दछ । कविताको मूल्याङ्कन गर्दा कविको वाचन शैलीले पनि ठूलो प्रभाव पार्दछ । हेम प्रभासको पुरस्कृत कविताप्रति असन्तुष्टि पोख्ने कवि र कवितानुरागीहरुले यी सबै कुराको उल्लेख्य चिन्तन मनन गरेरै बोलेका होलान् ।
नेपाल प्रज्ञा–प्रतिष्ठानको ६२ औँ वार्षिकोत्सव तथा राष्ट्रिय कविता महोत्सव २०७६ (असार ९, सोमबार) सम्पन्न भयो, तर पुरस्कृत कविहरुलाई कमैले बधाई दिए । बरु असन्तुष्टिका शब्दहरु खर्चिए । प्रथम हुन सफल हेम प्रभासको ‘परदेश गएका पतिका नाममा’ कविताप्रति पनि त्यस्ता धेरै शब्दहरु पढ्नमा आए– सोशल मीडियामा ।
यति भएर पनि कवि हेम प्रभास एक सशक्त कवि हुन्, राम्रा कवि हुन् । कला साहित्यको क्षेत्रमा एक सक्रिय कवि हुन् । उनकै शब्दमा भन्ने हो भने उनी हैसियत भएका कवि हुन् । अग्रज साहित्यकार एलबी क्षेत्रीका शब्दमा “प्रथम पुरस्कार प्राप्त गर्ने कवि हेम प्रभास राष्ट्रियस्तरकै सुप्रसिद्ध कवि हुन् ।” त्यसैले उनको ए…
POEMS FROM THE HIMALAYA
© Pancha Vismrit (पञ्च विस्मृत), स्रोत र लेखकको नाम खुलाएमा पुनर्प्रकाशन गर्न सकिनेछ
A poetry lover. Music and film lover. And having immense amount of respect for creativity.
"सबै चर्चित मान्छेहरू महान हैनन्, र सबै महान मान्छेहरू चर्चित छैनन् । जति नै सर्बसम्पन्न भए पनि मान्छेमा कहीँ न कहीँ बिचरा भन्ने ठाउँ हुन्छ नै हुन्छ ।
त्यही कारण मैले चर्चित, महान र ठूलो मान्छे बन्ने सपना नै त्यागिदिएँ । यो यात्रा भनेको सिर्फ प्रेम, मानवता र चेतनाको हो ।”
: About Pancha Vismrit (पञ्च विस्मृत)
: नदेखिएको आकाश - The Unseen Sky (पञ्च विस्मृतको प्रथम प्रकाशित कृति)
: Voice of the Himalayan Poets (Upcoming book of Pancha Vismrit)
All Posts/About the Blog
Book Review/A Reader's View
पञ्च विस्मृत लाइक पेज
"You must not lose faith in
humanity. Humanity is an ocean; ifafew drops of the ocean are dirty, the
ocean does not become dirty."
पञ्च विस्मृतको प्रथम प्रकाशित कृति, २००३
पञ्च विस्मृतको कविता वाचन (Poetry Recitation)
- कवि रामगोपाल आशुतोष पञ्च विस्मृतको कविता वाचन गर्दै (ग्रेस एफएम) : अलार्म
- कवि रामगोपाल आशुतोष पञ्च विस्मृतको कविता वाचन गर्दै (ग्रेस एफएम) : दुर्वासा बालकको गनगन
- प्रिय विगत (साउदी अरेबिया)
- कवि रमेश सायन पञ्च विस्मृतको कविता वाचन गर्दै (साउथ कोरिया)
Unicode to Kantipur converter
गोविन्दराज भट्टराईको ब्लग
रमेश सायनको ब्लग
मनोज बोगटीको ब्लग
सरण राईको ब्लग
इन्द्र नारथुङ्गेको ब्लग
जीतमान राई सविनको ब्लग
मनु लोहरूङ राईको ब्लग
भगवती बस्नेतको ब्लग
निर्मला खड्काको ब्लग
चन्द्र गुरूङको ब्लग
पञ्च विस्मृतको मूख्य ब्लग
पञ्च विस्मृतद्वारा अनुदित कविता
जीवन देवान गाउँलेको ब्लग
देबेन्द्र सुर्केलीको ब्लग
मौलश्री लिम्बूको ब्लग
नयाँ अन्लाइन डट्कम
स्वदेश नेपाल डट्कम
अङ्ग्रेजी समकालीन साहित्य
ई-साहित्य नेपाल डट्कम
ख सो खा स
डीसी नेपाल डट्कम
नयाँ समाचार डट्कम
नेपाल इजरायल डट्कम
परदेशी खबर डट्कम
पानबारी न्यूज डट्कम
सूचना खबर डट्कम
हरेक पल डट्कम